७० करोडकाे मात्र होइन लेखा समितिमा साढे पाँच अर्बको मुद्धा उठाएको छु: मिश्र (हेर्नुस् भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ७० करोडकाे मात्र होइन लेखा समितिमा साढे पाँच अर्बको मुद्धा उठाएको छु: मिश्र (हेर्नुस् भिडियो)
७० करोडकाे मात्र होइन लेखा समितिमा साढे पाँच अर्बको मुद्धा उठाएको छु: मिश्र (हेर्नुस् भिडियो)
admin February 22, 2020 भिडियो, समाचार	0
अडियो रेकर्ड सत्य हो । लेखा समितिमा मुद्दा परिसकेको थियो । लेखासमितिले फागुन ११ गतेको बैठक ८ गते सारेको थियो । त्यसपछि मैंले मेरो मुद्दा ओझेलमा पर्ने देखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरें । अडियो केही साथीहरुलाई दिएको हुँ । म भ्रष्टाचारमुक्त देशको पक्षमा छु । राज्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि तयार छु । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मन्त्री संलग्न हो । यो आइसकेको छ ।यसबारे सीआइबीलाई पत्र लेख्नु युक्तिसंगत मान्दिनँ ।
छानविनको दायरामा आइसकेको छ । छानविनका लागि सहयोग गर्न तयार छु । म भूमिगत हुन्नँ । सामान्य रुपमा हिंड्छु । यसमा करोड होइन अरबौंको कुरा छ । यसका पछाडि धेरै विषयहरु जान्न जरुरी छ । पृष्ठभूमीहरु बुझ्नुपर्छ । एमाआरपी फ्रान्सको कम्पनि ओभरथ्रोले छाप्ने टुंगो लागेको थियो । त्यसबखत यसको प्रतिनिधि फ्लोरेन पाकोलेन हुन् ।
एमआरपी छाप्ने टुंगो लाग्दा विकल पौडेल पासपोर्ट डिभिजनमा नेपाल सरकारको टेक्निकल अफिसर थिए । पछि सुरक्षा मुद्रणमा कार्यकारी निर्देशक भएर गए । पाकोलेन जर्मन कम्पनिमा गए । जर्मनको भेडस कम्पनिको सहयोग लिएर रिपोर्ट तयार गर्न थाल्नुभयो । मूल्यांकनमा आठ देखि १० अर्ब वृद्धि गर्नुभयो । होल सोलुसनका लागि वृद्धि गर्नुभयो ।
पछि हाफ सोलुसनको निर्णयमा जानुभयो । रिपोर्ट तयार गरी सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गर्नुभयो । मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यदल बनेको छ । सहसचिव, सचिव र मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउनुभएको छ दुईपटक यसलाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अवस्था छ । छानविनको विषय लेखासमिति र सांसदज्यूहरुको छ ।
स्पेशिफिकेशनमा गलत तरिकाले ल्याउने, स्टडी रिपोर्टमा मूल्य वृद्धि गरेर ल्याउने कार्य भयो । साँढे पाँच अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा स्वीटजरल्यान्ड सरकार र कम्पनिको कुनै संलग्नता छैन । कम्पनिको एजेन्डा थियो तर एजेन्डा छाडेर गइसकेको छ ।
सुहागरातमा दुध लिएर कोठमा छिरेकी मात्र थिइन्, पतिको यस्तो हर्कत देखेर चकित परिन श्रीमति!
नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि उडेको एयर काष्ठमण्डपको जहाज दुर्घटना
रवीन्द्र अधिकारीसँगको ३० वर्षे मित्रतालाई योगेशले यसरी सम्झिए (भिडियो)
भर्खरै अर्घाखाँचीबाट आयो बस दुर्घटनाको दुःखद खबर, १४ हताहत!
मुस्ताङमा भालुको आक्रमणबाट ३ दर्जन बढी भेडा मरे, किसानद्वारा सुरक्षाको माग